မဖယ်စကောင်း ဖယ်စကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » မဖယ်စကောင်း ဖယ်စကောင်း	6
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 15, 2015 in My Dear Diary |6comments
“မဖယ်စကောင်း ဖယ်စကောင်း ”
တော့ မြန်မာပြည်ဘက်ကို အထွက်ပြကြရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဥပုဒ်နေ့ကတော့ အပြင်ထွက်ရမယ့်ရက်နဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဆုံတော့
တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် ဘုရားဖူးထွက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲလို့ရုံးက ကလေးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တော့မူဆယ်ဘက်က
လှိုဏ်ဂူဘုရားကိုသွားမယ် ဘုရားကအပြန် မှာနမ်းခမ်းဘက်သွားတဲ့လမ်းက
လှိုဏ်ဂူဘုရားက မူဆယ်မြို့ကနေ မန်းလေးဘက်ထွက်တဲ့လမ်းမှာပါရှိတာပါ။
ဘုရား ၀င်ဝင်ခြင်း ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ လှိုဏ်ဂူလေးရှိပါတယ်။
လမ်းတစ်ဘက်ကတော့ တောင်နံရံအမြင့် တစ်ဖက်ကတော့ ရေမြောင်းကလေးရှိပါတယ်။
ရပ်တော်မူဘုရားဘေးနားကနေ ဖြတ်လျောက်ပြီး ဘုရားဆင်းတုတွေတန်းစီထားတဲ့နေရာမှာ
လူတွေစည်ကားနေတာနဲ့မ၀င်ဘဲ က္ကစ္ဆာာသယတောင်ကိုသွားဘို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထမင်းစားဘို့စောသေးတော့ တောင်ပေါ်ဘုရားကိုအရင်သွားဖူးပြီးမှဘဲထမင်းစားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
မူဆယ်စက်မူ့ရပ်ကွက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးနမ်းခမ်းဘက်သွားတဲ့လမ်းဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတောင်ကလည်း ကျယ်ခေါင်-မူဆယ်ကနေ လှမ်းကြည့်ရင်မြင်နေရတဲ့တောင်ပူုစာလေးပါဘဲ။
သာယာတယ်”လို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောပြဘူးလို့ သွားချင်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းထားတာရယ် တောင်က သိပ်မမတ်တာရယ်ကြောင့်
နှစ်သက်တမ်းအတော်ရင့်တဲ့ ညောင်ပင်ကြီးရဲ့အရိပ်ကလဲ ကျောင်းပုရ၀ုဏ်ထဲ
ပါလာတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ ဆရာတော်ကိုဝင်ပြီး ၀တ်ပြု။
ကျနော်ကတော့ ဘယ်နားနေဓါတ်ပုံရိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး လှည့်ပါတ်ကြည့်နေပါတယ်.။
အေးအေးလူလူ နားကြ ပါလာတဲ့မုန့်တွေအဆာပြေစားကြရင်း
ပါတ်ဝန်းကျင်အလှအပတွေကို ငေးမောလို့ဝတဲ့အခါ ပြန်ဘို့ပြင်ကြပါတယ်။
ထမင်းစားချိန်ရောက်ပေမယ့်လည်း ဒီအနီးအနားမှာ ထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းမရှိတာရယ်
ဟိုရောက်မှဘဲ စားနေကျဆိုင်မှာထမင်းစားမယ်လို့ တွက်ထားကြပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ပြီးသွားလို့ မရတော့ ကားပေါ်ကဆင်းပြီးမေးတဲ့အခါ
နမ်းခမ်းကနေပြန်လာလို့ မူဆယ်ကို ၀င်ရင် ဒီတစ်လမ်းဘဲရှိပါတယ်။
စက်မူ့ဘက်ကို ကွေ့ ပါတ်သွားလို့ရမယ့် ဖြတ်လမ်းရှိပေမယ့် ကျနော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်
ကားတန်းက သုံးတန်း ဖြစ်နေပြီး လမ်းတွေပိတ်နေပါတယ်။
ကားတွေပိတ်ကျပ်ညှပ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ ဆိုင်ကယ်တွေကတော့ ကွေ့ကောက်ပြီး
အပြင်ရောက်တော့မှကိုယ့်ထက်အရင်ရောက်နေသူကို စုံစမ်းစပ်စု လုပ်ရပါတယ်။
ဘယ်နားက စပိတ်လဲလို့ မေးတော့ မန်ဝိန်းပေါက်ကနေစပိတ်တာလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ ကျနော်ရယ် ကားမောင်းတဲ့ကလေးရယ်က ရှေ့ဆက်လမ်းလျောက်ပြီး
ကြည့်လိုက်တော့ တစ်နေရာမှာ လမ်းပြောင်းပြန်ရပ်ပြီး ထားတဲ့ ဆယ့်နှစ်ဘီးကား
“ဒီဘက်လမ်းတွေက လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကပ်တယ်။
မျက်နှာခပ်တင်းတင်းနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက် ကိုကားပေါ်မှာတွေ့ရပါတယ်။
“ညီလေး ရေ လမ်းပြောင်းပြန်ရပ်ထားတာလေးဖယ်လိုက်ရယ်
လမ်းနည်းနည်းတော့ ပွင့်သွားမယ်ထင်တယ်” လို့စကားစလိုက်တော့
“ကျုပ်တို့က ဒီနားတင်ည အိပ်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး “လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
“ညီလေး က လမ်းပြောင်းပြန်ရပ်ထားတာ ဖယ်လိုက်ရင် ဒီဘက်က ကားတွေသွားလို့ရတာပေါ့“လို့ပြောလိုက်တော့
“လူပါးဝ စကားပြောလို့ သေချာရပ်ထားတာ”လို့ ခပ်တင်းတင်းပြန်ပြောပါတယ်။
အဲတော့ လမ်း ပြောင်းပြန်ရပ်တယ် ကြိုက်တဲ့ကောင် လာခဲ့လို့ ရတယ်”
“ညီလေးရေ အဲဒီလူ လူပါးဝသွားတာဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါ့ညီက သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဖယ်ပေးလိုက်ပါကွာ” လို့ပြောတော့
“ ကဲဗျာ ကျနော် ကားဘေးချ ပေးမယ် နောက်ဆုတ်လို့ရအောင်တော့ ရှင်းပေး“လို့ဆိုတာနဲ့
အားလုံးက ၀ိုင်းပြီး သူ့ကား နောက်ဆုတ်လို့ရအောင် ၀ိုင်းကူပြီးရှင်းပေးကြပါတယ်။
သူ့ကား ဖယ်လိုက်တော့ တစ်ဖက်လမ်းကြောပွင့်သွားပါတယ်။
ဒီလမ်းပေါ်မှာပိတ်နေတာ ကားအစီးရေက ဟိုဘက်ဒီဘက်ရာချီပြီးရှိနေပါတယ်။
အဲဒီညီလေးက လမ်းဖယ်ပေးလို့သာ တစ်ဖက်က ကားတွေသွားလို့ရနေပေမယ့်
တောတော်လေးကြာတော့ ကားထဲက ကလေးတွေလဲ ပူလွန်းတော့ မနေနိုင်တော့ပါဘူး၊
အနီးအနားမှာ ထိုင်စရာ စားစရာ ဆိုင်ရှိလိုရှိငြားအပြင်ထွက်လာကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာရပ်နေရတာ တစ်နာရီကျော်လောက် ကြာပြီဆိုတော့ ဘိုက်လဲဆာ ရေလဲငတ်ပေါ့။
ကံကောင်းချင်တော့ ကျနော်တို့ ရပ်နေရတဲ့နေရာနဲ့အတော်လှမ်းလှမ်းမှာ ကျနော်တို့ထဲက
သူနဲ့ သိတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီဆိုင်ကထိုင်စရာပေး ယပ်တောင်တွေထုတ်ပေး သောက်ရေသန့်ဘူးတွေချပေး
“ အခုနောက်ပိုင်း လမ်းက ခဏခဏ ပိတ်တာ ၊
စိတ်ပျက်ဘို့ကောင်းတယ် “လို့ ဆိုင်ရှင်ကောင်မလေးပြောပြတာကြားရတော့
ကျနော်တို့ထိုင်နေတာတစ်နာရီကျော်လောက်ရှိပေမယ့် ကျနော်တို့ကားကတော့ ရောက်မလာသေးပါဘူး။
ဆာဆို နေ့လည် နှစ်နာရီတောင်ရှိနေပါပြီ။
ကားပေါ်ကကောင်လေးအတွက်တော့ ထမင်းဘူးနဲ့ထည့်ပြီး ပို့ပေးမယ်ပေါ့။
စားချင်တဲ့ဟင်းတွေမှာ အမြန်လုပ်ပေးပါ လို့ ပြောထားပေမယ့်
ကျနော်တို့ ဟင်းပွဲတစ်ပွဲစရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ကား လဲ ကျနော်တို့နားရောက်လာတာနဲ့
ကားကို ကားတန်းထဲက ထွက်ပြီး ထမင်းဆိုင်နားမှာရပ်ခိုင်းရပါတယ်။
ကားတွေကို တစ်စီးပြီးတစ်စီး ဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ခိုင်း။
တန်းစီပြီးရပ်ခိုင်းလုပ်တော့မှ လမ်းကြောက နည်းနည်းခြင်းပွင့်လာပြီးကားတွေသွားတာမြန်လာပါတယ်။.
ကျနော်တို့လည်းစားသောက်ပြီးတဲ့အခါ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ညနေသုံးနာရီကျော်နေပါပြီ။
ကားတွေ့တရွှေ့ရွှေ့သွားနေပေမယ့် ကားအစီးရေ ရာချီပြီးရှိနေပါသေးတယ်။
ကျနော်တို့လဲ ကားတန်းထဲဝင်စီပြီး တစ်လှိမ့်ချင်းရှေ့ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။
အတော်လေးကြာမှ စက်မူ့ ဘက်ကို ၀င်လို့ရတဲ့ နေရာရောက်မှ ကားကွေ့ပြီးဝင်ခဲ့ရပါတယ်။
အရင်က ကားအသွားအလာသိပ်မရှိတဲ့ ဒီလမ်းကြားလေးမှာတောင်
ကျယ်ခေါင်ထဲပြန်ဝင်မယ့် ဂိတ်ပေါက်ရောက်တော့ ညနေလေးနာရီကျော်နေပါပြီ။
အချို့ကတော့ လမ်းပြောင်းပြန်ရပ်ထားတာ ကိုယ်ကစည်းကမ်းဖောက်ထားတာကိုဘဲ
ငါလုပ်ရဲတယ် ဆိုတဲ့ တလွဲ မာနတွေ
ငါရှေ့ရောက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး သူ့လမ်းကိုယ့်လမ်း မရှောင်ဇွတ်တိုးကြတာတွေ
ဖယ်သင့်သူက မဖယ်ဘဲ လမ်းပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ထပ်နေတယ်ဗျာ
Mike says: .ကိုပေါက်ရယ်..ဓါတ်သေလေးတွေနဲ့ရောတင်ရင်ပိုကောင်းမှာဗျ…
.ရန်ကုန်အပါအ၀င် မြို့တော်တော်များများမှာလမ်းပိတ်တာ အဲ့လိုတွေကြောင့်များပါတယ်
Shwe Ei says: -ရှုခင်းတွေအကြောင်းရေးထားတာ .. တော်တော်သာယာမယ်လို့ မှန်းလို့ရတယ်
-အခုတစ်လော နေရာအနှံ့မှာ..ဒေါသအပြည့် မောဟ အပြည့်နဲ့ နေရာလုနေကျတာတွေ
-တွေ့ရတော့…သံဝေဂ တောင် ရမိသလိုလို :P
-လမ်းမှန်နေလို့ဆိုပီး…ဖိပြောလိုက်မယ်..ဖိဆဲလိုက်မယ် ဆိုတဲ့သူက တစ်မျိုး
-ဘဒူ ဘာပျောပျော ပြန်ပြောပလိုက်မယ်လို့ ပြင်ဆင်ထားပီး .. လက်ပါချင်သူက တစ်မျိုး
-လူတွေ ဒေါသကြီး လာရင် ကမ္ဘာပျက်ဖို့ နီးလာဘီလို့တော့ ကြားဖူးတယ် ခည..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပုံလေးတွေတင်ပေးပါမယ်
Alinsett @ Maung Thura says: ကားမောင်းရင် လမ်းပိတ်တဲ့ ဒဏ်ကို အခုတလော အတော်ခံရတယ်..
ရန်ကုန်ထဲတင် ဆိုးတယ် ထင်နေတာ..
တခြားနေရာတွေမှာလည်း… အဲ့ဒုက္ခ ခံရတာပဲနော်..
အင်းလေ… လူဦးရေက ထူထပ်လာတော့လည်း….
အဲ့လူဦးရေတွေထဲ တချို့က…အသိဥာဏ် ထူ ပိန်းပြီး.. ထင်ရာစိုင်းတတ်ကြတာတွေကြောင့်လည်း…
မကြာသင့်ဘဲ ပိုကြာရတတ်သေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.